whuk-46651 – Page 256 – WunYan
Posted on November 6, 2017 by whuk-46651
ကျွန်တော်ကတော့.. သစ်သားနဲ့.. လေယာဉ်ပျံဆောက်ပြတဲ့ ကလေးကို အပြစ်မတင်ပါဘူး. သူ ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့..ပညာရေးစနစ် မတိုးတက်တဲ့ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ မဖွံ့ဖြိုးတဲ့..အသိပညာဗဟုသုတ… အဲဒါတွေကို ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့.. မသေသေးတဲ့ အာဏာရှင်တွေကိုပဲ အပြစ်တင်တယ်.. ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့ငယ်ဘဝမှာ.. ဘယ်နိုင်ငံနဲ့မှမတူတဲ့ လူငယ်ဘဝအချိန်တွေ ပြုန်းတီးခဲ့ဖူးတယ် အလွတ်ကျက်ပညာရေးစနစ်နဲ့..ခိုးချပညာရေးကို မှီခဲ့ဖူးတယ်… ပညာရေးတစ်ဖက်.. ကြုံရာကျပန်း အလုပ်တွေ လုပ်ခဲ့ကြဖူးတယ် အခု.. ဒီကလေးတွေမျိုးဆက်အထိ… တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးမှု ခေတ်နောက်ကျချိန်မှာ.. ပညာတပိုင်းတစ်စနဲ့..ထမင်းဝဖို့ ကာယလုပ်ငန်း…
ဘဝဆိုတာ တိုတိုလေး သံသရာဆိုတာ အရှည်ကြီး
လိပ်ခေါင်းပျောက်တဲ့ ဆေးနည်း ( သပွတ်ခါးသီး )
လိပ်ခေါင်းပျောက်တဲ့ တောဆေးမြီးတိုလေးကိုလည်း မှတ်သားထားသင့်ပါသည်။ သပွတ်ခါးသီးအခြောက်၃ လုံးခန့်ကို နုညက်နေအောင် အကြမ်းပန်းကန် တဝက်ကျော်ရသည်အထိ ထောင်းပါ။ စက္ကူ ပွ သို့မဟုတ် မှို င်းခံစက္ကူ ဆီးစေ့အရွယ်လုံး သို့မဟုတ် တလက်မခန့်အရှည်လိပ် ။ရေဆွတ်ပြီး ဆေးမှုန့် အနည်းငယ် သုတ်လိုက်။ စအိုထဲသွင်းပြီး ရေဝဝ သောက်။ တနာရီခန့်ကြာလျှင် ဝမ်းများများသွားပြီး လိပ်ခေါင်းရှိသရွေ့ စအိုမှ အပြင်ထွက်လာမည်။ ထိုသို့ လိပ်ခေါင်းထွက်လာလျှင် ကုတင်ပေါ်…
သစ်သားလေယာဉ်ပျံပြုလုပ်သည့် မောင်ကျော်ဇင်ဝင်း လေကြောင်းဝန်ကြီးဌာနနှင့် တွေ့ဆုံ
မုံရွာ ကျွန်းကြီးက လေယာဉ်တည်ဆောက်သူ မောင်ကျော်ဇင်ဝင်း ဟာ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးဆန်းကျော် ဦးလေးဖြစ်သူ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတင်မြင့်တို့နဲ့အတူ ရန်ကုန်လေဆိပ်ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။ ရန်ကုန်လေဆိပ်လုပ်ငန်း Yangon Aerodrome Co.Ltd. အောက်ရုံး အစည်းအဝေခန်းမမှာ တွေ့ဆုံပြီး ခရီးဥင်္ီးကြိုဧည့်ခံပါတယ်။ ပထမဆုံး အနေနဲ့ လေကြောင်းသမိုင်းကို power point နဲ့ရှင်းပြပေးပြီး လေယာဉ်တစ်စီးတည်ဆောက်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်တယ် အခြေခံအားဖြင့် ဘယ်လို knowledge တွေရှိရမယ်ဆိုတာတွေကို ပုံတွေနဲ့တကွရှင်းပြပါတယ်။…
ကျွန်တော်၏ အစ်မကြီးဆုံး(၄၈နှစ်)က အသက်ငယ်စဉ် ၁၀ နှစ်အရွယ်က ချောင်းဆိုးရင်ကြပ်ရောဂါ ဖြစ်ပြီး နေ့ရောညပါ ချောင်းဆိုးနေတာကို အဘိုးအိုတစ်ဦးက လာတွေ့ပြီး ဤကဲ့သို့ ဆေးစွမ်းတစ်လက် ပေးခဲ့၍ ချောင်းဆိုးရင်ကြပ်ရောဂါ ပျောက်ကင်းခဲ့ပါတယ်။ “ဝက်သား(အသား)ကို တစ်တုံးစာ တုံး၍ ခါချဉ်အုံတစ်ခုတွင် ထိုးထည့်ထားပါ။ခါချဉ်များ သေးပန်းထည့်သောကြောင့် ဝက်သားက အနီရောင်မှ အဖြူရောင်သို့ ပြောင်းလာပါမယ်။နာရီဝက်ခန့် ထားပြီးလျှင် အဲ့ဝက်သားကို မီးကင်၍ သူ့သက်သက် စားပါ။ ခါချဉ်သေးပန်းထားသောကြောင့်…
သစ်သားနဲ့ ဆောက်ထားတဲ့အိမ်တွေမှာ ညည တောက်ခေါက်သံတွေ ထွက်နေရင်
သစ်‌မင်း ပုံပါ။ သစ်‌ဆိုးဝါးဆိုး‌တွေကိုနိုင်‌နင်းတယ်‌လို့ဆိုပါတယ်‌။ အိမ်‌‌တွေမှာ သစ်‌ဆိုတာ မပါမဖြစ်‌ပါ။ သစ်‌၀ါး‌တွေဆိုတာကလည်း ‌တောမှာ‌ပေါက်‌ကြတယ်‌။ အချို့သစ်‌၀ါး‌တွေက အန္တရာယ်‌ဖြစ်‌‌စေတတ်‌တဲ့ ကမ္မစိဒ္ဓိရှင်‌‌တွေရဲ့ အရိပ်‌အ‌ငွေ့‌တွေပါလာတတ်‌ကြပါတယ်‌။ အဲလိုသစ်‌၀ါးမျိုးနဲ့ ‌ဆောက်‌မိရင်‌ အဲဒီအိမ်‌မှာ‌နေကြသူများအတွက်‌ မ‌ကောင်း‌တော့ပါဘူး။ ပြဿနာဖြစ်‌တာများလာပါတယ်‌။ သတိပြုမိရင်‌ ညည‌တောက်‌‌ခေါက်‌သံလိုမျိုး ကြာရတတ်‌ပါတယ်‌။ ဒါကတကယ်‌ပါ လက်‌သမား‌တွေသိကြပါတယ်‌။ ကဲ ဒီအခါဘယ်‌သစ်‌၀ါးက မ‌ကောင်းဆိုးဝါးသ‌ဘောပါ‌နေတာလဲ။ ဘယ်‌လိုသိမလဲ။ သစ်‌‌ခြောက်‌လို့လည်း‌ခေါ်တယ်‌‌အဲလို‌တောက်‌‌ခေါက်‌တဲ့သစ်‌၀ါးဆိုရင်‌‌လေ။ ဘယ်‌‌နေရာမှာသုံးမိမှန်းမသိ‌တော့ ဘယ်‌လိုဖယ်‌မလဲ။ ‌နေရာသိရင်‌‌တောင်‌ ပရိ‌ဘောဂကို ဖျက်‌ဆီးပြီးအသစ်‌လုပ်‌ရမှာ‌နော်‌။…
ဒီနေ့မနက် ဗဟို စည်ကနေ ပါရမီ သွားဖို့ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ရှိတဲ့ အငှား ယာဉ် တစီး ကိုတားလိုက်တော့ မလှမ်းမကမ်းမှာရပ်ပါတယ်။ ပါရမီ ကို ဘယ်လောက်လဲ လို့ မေးတော့ ဘာမှမ ဖြေပဲကား ပေါ်တက် ဖို့ ပဲ လက်ပြ လို့ ဝင်ထိုက်လိုက်ပါတယ်။ဝကား ထိုင်ခုံ တွေ ကလည်း သပ်ယပ်သန့်ရှင်း လို့ အဲယားကွန်းကလည်း အေးလို့…
လာနီညာ ရာသီဥတုဖြစ်ဖို့ သေချာမှုရှိနေတဲ့ ဒီနှစ်ဆောင်းရာသီအတွက် ခန့်မှန်းချက်
လာနီညာ ရာသီဥတုဖြစ်ဖို့ သေချာမှုရှိနေတဲ့ ဒီနှစ်ဆောင်းရာသီအတွက် ခန့်မှန်းချက် ၆-၁၁-၂၀၁၇ / နံနက်(၉း၃၈)နာရီ ၂၀၁၇-၁၈ ဆောင်းရာသီကာလဟာ လာနီညာရာသီဥတုဖြစ်ဖို့ ၅၅% မှ ၆၅% အထိ သေချာမှုရှိနေပါတယ်လို့ ဆိုပေမယ့် (၃၀-၁၀-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိတော့ လာနီညာလို့မကြေငြာနိုင်သေးပါဘူး။ ကမ္ဘာ့မိုးလေ၀သအဖွဲ့ချုပ်ရဲကခန့်မှန်းချက်အရ ဒီနှစ်ဆောင်းမှာ လာနီညာဖြစ်လာခဲ့သည့်တိုင်အောင် အားကောင်းတဲ့လာနီညာဖြစ်မလာနိုင်ပဲ အားအနည်းငယ်မှ အားအသငိ့အတင့်သာရှိတဲ့ လာနီညာဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ နောက်ပြီး လာနီညာရာသီဥတုကာလဟာလည်း အချိန်မကြာလှပဲ နောက် နှစ်ဆောင်းရာသီမကုန်မီမှာ အားလျော့သွားလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။…
ရခိုင် ၇ ဦးကို ဘင်္ဂလီများ အုပ်စုလိုက် ဓါးဖြင့်လိုက်ခုတ်
Posted on November 3, 2017 by whuk-46651
မောင်တောမြို့နယ် သရေကုန်ဘောင်ကျေးရွာမှ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား နှစ်ဦးကို နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီအချိန်တွင် ညောင်ပင်ကြီးကျေးရွာနေ ဘင်္ဂါလီများက အုပ်စုလိုက် ဓါးဖြင့်လိုက်ခုတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မိသားစုဝင်များထံမှ သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ သရေကုန်ဘောင်ကျေးရွာနေ ဦးသူရထွန်း၊ ဦးလှသန်းမောင်နှင့် အတူ စုစုပေါင်း ရွာသား ၇ ဦးမှာ ငါးရှာဖွေ၍ ပြန်လာစဉ် ညောင်ပင်ကြီးကျေးရွာမှ ဘင်္ဂလီများက အုပ်စုလိုက် ဓါးဖြင့်…
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါ လုံးဝ ပြန်မဖြစ်စေနိုင်သော ကိုယ်တွေ့ ဆေးနည်းကောင်း တစ်လက်
Posted on November 2, 2017 by whuk-46651
ကျွန်တော် နှလုံးရောဂါ ပြင်းထန်စွာခံစားရချိန် ကျွန်တော် နေထိုင်ရာပုသိမ်မြို့ရှိ ပုသိမ် ဆေးရုံကြီး နှဇီဝကအထူးကု ဆေးခန်းတို့ တွင်တက်ရောက်ကုသခဲ့ ရာဆေးစစ်ချက်အရ နှလုံးသွေးကြော သုံးချောင်းကျဉ်းနေပြီးတစ်ချောင်းမှာ ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်တော့သော ကြောင့် နှလုံးစက် ထည့်ရမည့်အခြေနေဖြစ်ခဲ့ပါသည် ။ ထိုအချိန်တွင်မိတ်ဆွေတစ်ယောက်မှ ကျွန်တော့် လို ခွဲစိပ်ခါနီးလူနာတစ်ဦး မခွဲစိပ်ရပဲသက်သာပျောက်ကင်းသွား သည်ဆိုသောဆေးနည်းကိုပေးသဖြင့် ရန်ကုန် ၌ဆေးကုသခံရန်ပြင်ဆင်နေချိန်တွင်ခုနှစ်ရက်မျှဆက်တိုက်သောက်ခဲ့ပါသည် ။ ထို့ နောက်ရန်ကုန်အာရှတော်ဝင် အထူးကု ဆေးခန်း…
Previous 1 … 255 256 257 … 357 Next